Badhasaabka Togdheer Oo Sheegay In Ay Gebi Ahaanba Mamnuuceen Bixinta Waraaqaha Lagu Codsadao Dhulka Danta Guud | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Badhasaabka Togdheer Oo Sheegay In Ay Gebi Ahaanba Mamnuuceen Bixinta Waraaqaha Lagu Codsadao Dhulka Danta Guud
Published on December 3, 2017 by Khadar A Muse (Hargeisa Office) · No Comments
Burco(SDWO): Badhasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax,ayaa sheegay in ay joojiyeen dhismeyaal sharci darro ah oo lagu boobay dhul dawladeed oo danguud ah isla arkaana ay shaqsiyaad gaar ahi sharci been abuur ah u soo qaateen oo ay dhisanayeen.
Waxaanu tilmaamay in ay qabteen waraaqo sharci darro ah oo loo soo samaystay qaadashada hanti danguud ah oo kala duwan isla markaana isugu jirta dhul iyo dhismeyaal ay dawladdu leedahay.
Waraaqahaas oo uu tilmaamay in ay yihiin kuwo aan sharci ahayn kana soo baxay wasaaradaha dawladda qaarkood xilligan kala guurka ah lagu bixiyay hanti qaran.
Waxaanu intaa raaciyay in ay gabi ahaanba joojiyeen in hanti qaran oo dan guud ah in waraaqo loo soo samaysan karo ama la bixin karo.
waxaanu sheegay in ay joojiyeen dhismeyaal sharci darro ah oo lagu qaadanayay dhul dawladdu leedahay oo la iska dhisanayay,waxaanu amar faray dhammaan isuduweyaasha laamaha dawladda ee gobolka Togdheer iyo ciidanka booliska
Waxaanu uga digay gaacsato uu sheegay in ay wadaan hanti qaran boob in ay ka waantoobaan sifaha sahrci darada ah ee ay waraaqaha uga soo samaysanayaan xilligan qaar ka mid ah wasaaradaha ee ay ku doonayaan in ay ku qaataan Hanti qaran.
“Waxaanu soo saarnay qoraal ka hadlaya oo mamnuucaya in xilliga kala guurka la bixin karo hantida qaranka ka dib markaanau qabanay qoraalo bilaa summad ah oo ka soo baxay wasaaradaha qaarkood oo tilmaamaya in la bixiyay hangaradii la odhan jiray Inji iyadoo aan dawladdana hanta looga xeraynin.
Iyadoo sifihii sharci ahaa ee daaraha loo iibin jiray ee gudiga qandaraasyada iyo gudigii karaka ahayd ee Madaxweynuhu u magacaabay midna aanay qoraal siinin.
Taa annagoo ka duulayna waxaan uga digayaa ganacsatada in ay waraaqo aan sal iyo raad lahayn usoo samaystaan hadhawna ay ku murmaan waxaanan u sheegayaa in aanay u shaqayn doonin.
Waxaan uga digayaa ganacsatada danaynaya hawlahaas ee kuwii ugu dambeeyay ay yihiin hangaradaa Injida oo ay ku jiraan kuwii beeyadaa ku jira waxaa ku jira suuqii maalintii dhawayd laga hadlayay ee ahaa suuqii bacadlaha oo sifihii Madaxweynuhu ku bixiyay sifo aan ahayn aan loo isticmaali Karin.
digreeto Madaxweyne ayaanu haynaa digreetada Madaxweynaha waxbaa ku cad,waxaan farayaa dawladda hoose in aanay cidna mulkiyad u samayn karin sharci darro ah oo aan waafaqsanayn shuruucda dalka” ayuu yidhi Ramaax oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaaladda Burco.
Waxaa kaloo uu faray dhammaan isuduweyaasha laamaha dawladda ee gobolka Togdheer iyo ciidanka booliska ee heer gobol iyo degmoba isafoo faray in aan la dhisan karin dhulka dawladda lana bixin karin booliskana amar ku siiyay in ay joojiyaan cidkasta oo isku dayda in ay dhulka dawladda dhisato.
Waxaanu yidhi “Waxaan farataa dhammaan isuduweyaasha laamaha dawladda in la dhisi karin lana bixin karin dhulka dawladda kuwa imika dhismuhu ka socdona la joojinayo labadii aanu imika(shalay) soo aragnayna aanu joojinay.
Waxaan leeyahay hala joojiyo dhismayaasha sharci darada ah ee hantida dawladda lagu boobayo ee lagu qaadanayo xilligan kala guurka ah ciddii amarkaa u hoggaansami waydana tallaabo ayaanu ka qaadaynaa.”
“Dhismayaashaa habeenkii iyo maalintiiba la wado ee sharci darada ah ee lagu qaadanayo hantida ummadda oo ay ka qayb qaadanayaan masuuliyiin waaweyn oo dawladda ka tirsan waxaan u sheegaynaa in tallaabo sahrciya laga qaadi doono oo aanay soconayn in hantida qaranka la boobo masuulka ku dhex milmana noocuu doono ha ahaadee tallaabo ayaanu ka qaadaynaa.”ayuu yidhi badhasaabka Togdheer.